Fancyco helay 2004. Shirkadda Our noqday qeybiyaha dahab ah Alibaba ka badan 14 sano. Waxa ay ahayd marxalad kala guura oo muhiim ah sanadkii 2005 taas oo aanu leenahay warshad gaar ah. In 2015 Fancyco si guul ah ku soo gashay suuqa Nigeria iyo Uganda oo calan kor u brand No.1 warqad iyo nadaafadda sticker wax soo saarka ee dalalkaas. Haatan waxaan ku takhasusay qalabka xirxirida iyo daabacaadda. In mustaqbalka danaha macaamiisha iyo baahida suuqa waxaan gelin doonaa in meesha ugu horeysa, uga sooco, nafteena dherginaya shuruudaha macaamiisha iyo filasho, iyo bixinta adeega kuugu dhow.
Our shaybaarka ayaa shaqaalaha kormeerka xirfadle, damaanad in bixiya macmiilka waxyaabaha aqoon ku salaysan qalabka imtixaanka sare. Dhammaan shaqaalaha maray imtixaanka shahaadada kormeerka qaranka ama imtixaanka shahaadada warshadaha. Company maal lacagta malaayiin in ay iibsadaan qalab QC sare, oo ay ku jiraan Tusiyaha dhalaalisaa Flow Speed, Tusiyaha tagga khad, American Aglient Gas Chromatogram Instrument, Qoyaanka Meter, American X-Umaad Spectrophotometer iyo wixii la mid ah. Kuwani waxay qalab horumarsan iyo nidaamka QC Heerka sare ballan qaaday shirkadda ammaanka jidka ku sii waxyaabaha hal-abuurnimo iyo horumarinta.
waxyaabaha ugu weyn ee shirkadda ayaa loo qaybin karaa laba qaybood: mid waa Cabaynta iyo qalabka daabacaadda (waxaa ka mid ah: xirmo aseptic, baakada sigaarka, advertising iyo qalabka daabacaadda digital, iwm); kale waa nadaafadda iyo alaabta nadaafadda (xafaayadda, surwaal tababarka, makiinadaha, hoos loo gashto, guntay, iwm)
Waxaan ku adkaysanayaan in wax soo saarka oo tayo leh waa tartan noo muhiim ah, raac mabda'a fiican adeegga macaamiisha iyo hal-abuurnimo ahaan continuously.to ganacsi fasalka-koowaad ee dunida oo dhan.
By 2016, waxaan leenahay 5 alaabooyinka, 77 shatiyada hal-abuurnimo, 4 gobolka Technology R. & D. Xarumaha, maray shahaadooyinka caalamiga ah ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000, SGS, ETC
Flexo Print System, Print System Rotogravure, Heidelberg mowjadda Print System, David-Standard System dukumiintiyo, HL dukumiintiyo System, SWITZERLAND LF-IV700 / CH Abuulahab, Daboolayo System, Automatic Full-System Dia-Jarida, kurka Machine, Intelligent QC Machine, DH IMAVISION QC, xirxirida Automatic & Nidaamka Bixinta
Shirkadda Our ku adkeeyey xiriirka ganacsi ee deggan oo dheer leh macaamiisha ka South Asia, Bariga Dhexe, Afrika iyo South America. Dhanka kale 'Toptac' 'OTAC' summad ayaa horay isaga diiwaan galiyay macaamiisha suuqa maxaliga ah iyo la aasaasay hay'adda ee Pakistan.
Waxaan ka fiirsan doonaa waxa aad u khuseeyaan laga yaabaa, ka hor tago waxa laga yaabaa in aad u baahan tahay, Si loo siiyo adeegyo tayo leh qiimo macquul ah in ka badan laga filayo ee macaamiisheena xurmayn. Waxaan dhexgalaan daacadnimo, aaminaad sharafta iyo ixtiraamka dhammaan hawlaha ganacsigayaga